Isbeddelka xajmiga si aad u yar u isticmaashid Microsoft Word iyo wax kale - Lafiiri
Maarso, 2010 dhowr
Word 2007 iyo saldhigeeda, sida AutoCAD waxaan ka tagnay waxyaabo ka baxsan xakameynta wakhtiyada aan ku jirno.
Anigu waxaan raadinayey in aan qoraalka ka soo rogo jajab ah illaa xabbad, kaas oo ahaa mar kaliya guji menu. Fikrad ma ahan meesha uu yahay, oo haddii ay jirto, ma aanan lahayn sabir ku filan, markaa waxaan bilaabay inaan isku dayo isku-dhafka furayaasha, isbeddel, ctrl, hoose, iyo F2, F4, iwm.
Ugu dambeyntii (dabayaaqadii) waxaan ku dhacay shift + F3.
Qoraalka ayaa la doortaa, ka dibna Shift + F3, iyo marka ugu horeysa oo kaliya xarfaha ugu horeeya ee qoraalka ah ayaa ah kuwo waaweyn:
Haddii Shift + F3 la mariyo mar kale, wax walba waxay ku faani doontaa:
Iyagoo aan ogeyn waxa muhiim ah ahaa, waxaan ka shaqeysiin qaar ka mid ah jilayaasha qalaad bracketed images, hyperlinks, qormo, geesi ... waxba la mid ah, kaliya keenay xusuusta wixii aan ku sameeyey shaashadda buluug ah Word Perfect ahaa.
Tani waxay dhacdaa sababtoo ah sharciyada beeraha ayaa la bilaabay. Waxay noqon lahayd in la arko dhibaatada aan soo maray, sababtoo ah si kastaba ha ahaatee waxaan rabay, wax walba iyo aqoontayda geofumar ah ee cajiibka ah ma suurtagal ah ilaa aan ka raadiyey xiriirka internetka.
Si aad udhaqaajiso ama u demiso waxaa loo isticmaalaa Alt + F9
Haddii aad rabto inaad bedesho xajmiga kowaad ee jajabinta leh Excel, waxaa lagu sameeyaa shaqooyinka soo socda:
MAYUSC si ay u beddesho kiis weyn
MINUSC inay u guurto qadarin
NOMBREP-yada si aad uqortaan warqadda koobaad
Qaadashada unugga ayaa ahaa A2, ka dibna:
= MAYUSC (A2) Beddel qoraalka u QORINTA DHAMMAAN (JUAN CARLOS PERDOMO)
= MINUSC (A2) Beddel qoraalka dhammaan jaangooyooyinka (juan carlos perdomo)
= NOMPROPIO (A2) Beddel qoraalka nooca shaqada (Juan Carlos Perdomo)
Post Previous«Previous GPS Babel, ugu fiican ee lagu shaqeeyo xogta
Post Next Casinos khadka ugu wanaagsanNext »
7 Jawaab ah "Beddelka xariifka yar ee erayada Microsoft Word iyo waxyaabo kale"
Marianela isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin inaad gelisid hyperlinks iyo sawirada gawaarida !!!, waxay aheyd hal sanno tan iyo markii aan arkayay iyaga oo aan meel ku aragnay oo aan meelna u soo bixin sida bedelida iyaga
Juan Sanchez isagu wuxuu leeyahay:
Wanaagsan, Thanks to posting waxay ahayd caawimo weyn.
Thais isagu wuxuu leeyahay:
Iyo ... fursad kasta qof baa ogaan doona sida sawir loogu gudbiyo "Watermark"? Ereygii hore waxaan si fudud u xulay muuqaalka, xulo "Sawirka Sawirka" halkaasna si fudud oo aan shaqo badan ku jirin ayaan doortay "Watermark". Maahan, hadda waa inaad "baxda" ilaa aad ka gaareyso waxa aad rabto. Waan ogahay inay jiraan qalabka jilicsan ee wax ka beddala sawirada, laakiin marka hore ma ahayn inaan isticmaalo. Waan ogahay inay leedahay "Watermark", laakiin marka loo eego "bogga asalka", sidaa uma shaqeynin.
Haddii uu qof ogaado meesha codsigan uu yahay, waad ku mahadsantihiin.
Salaan ka timid Carracas, Venezuela.
Hello Monica, oo ah ikhtiyaarka ah inaad ka guurto jaangooyaha si aad u sarreeya, laakiin ma ahan dhinac kale, laga bilaabo xajmiga si aad u yar ama ugu badasho xarafka ugu horeeya ereyada.
Markaas anigu waxaan ahay kan keliya ayaa qaba kala duwan, waxaana ku talin lahaa in aan dhammaan isku kaaya barbardhigaan, waxa ay u muuqataa goobaha aad u dareen leh oo weyn marka la isticmaalayo hawlaha gaarka ah, tusaale ahaan, haddii aad tahay miis, aad leedahay dhammaan fursadaha on toolbar ah gacanta, in kaliya noqotay koorsooyinka idin siiyo doorasho si aad u aragto natiijada, haddii aad sawiro aad u, iyo wixii la mid walba. Oo dhibaatada comentabais xarfo aan u arkaa in ay si Fogtahay: waxaad dooran qoraalka aad rabto in ay u baddashaan kiiska sare, iyo icio menu diilinta Source ah, aad leedahay fechita aad geeyo karo, waxaa ka furmay suuqa kala halkaas oo dhammaan doorashooyinka ayaa u muuqda, midkoodna waa LAMBAR.
Sidaa darteed, aniga, saaxiibkeyga qaaliga ah, isticmaal erayga 2003 .... iyo dhammaan suurtogalkaaga.
Sida laga soo xigtay MS, isbeddelka qormooyinkiisii ​​hore, oo aan aaminsanahay in loogu yeedhay 2005, wuxuu ku saleysan yahay "daraasado ku saabsan dhaqanka isticmaalaha ... blah blah blah".
Runtu waxay tahay in "kooxdiisa xallinta" aragtidayda aysan u horseedin natiijooyin wanaagsan. Waxaan u istcimaalaa qolka xafiiska laga bilaabo 95 waxaana layla bartaa dhamaan jidadkiisa aan waligood is bedelin…. labadan qaybood ee ugu dambeeyay.
Niyadjabkii uu lahaa markii uu rabay inuu raadiyo ikhtiyaarka oo aan heli karin.
Markaa waan xaliyay anigoo kumbuyuutarkeyga ku dhejinaya 2003. Dabcan, haddii kulan kale qof "la cusbooneysiiyay", midkoodna, inkasta oo aan ogaaday adeegsiga qaarkood ee taabashada saxda ah ee i siiyay natiijooyinka.
XUSUUS: Su'aalahan ugu dambeeya ee suurtagal maahan kuwa caqli-gal ah ee ay soo bandhigeen waana in ay hore u soo dhameeyeen go'aankooda. In gaaban ...
Waxaan dareemayaa dhibaatadaada sida hadey ahaan lahayd ;-), waan necbahay sidoo kale wax walbaa iga qaadataa wax ka badan sidii hore, iyo ficil ahaan iyo si ka sii xun